Homeसमाचारएकै घरका दिदि भाई बीच घिनलाग्दो प्रेम, भागेर बिवाह गरेपछि आमा रुँदै(भिडियो सहित)
January 31, 2021 admin समाचार 4565
भारतको द्धवा’रका भन्ने ठाउँमा बस्दै आएका थिए २१ वर्षीय देवेन्द्र बाठा र बाँकेको बैज’नाथ ५ बनकटुवामा बस्थिन् २२ वर्षीय खेमसरा बाठा ना’तामा दिदी भाई पर्दछन् । उनीहरु दाजुभाईका छोराछोरी हुन् । हाड ना’ता एउटै भएका र म’र्दापनि १३ दिने जुठो लाग्ने यी दिदी भाईबी प्रेम सम्बन्ध निकै लामो सम’यदेखि रहेछ । भाई देवेन्द्र भारतमा बस्ने भएपनि उनले नेपालमा बसेकी आफ्नै ठूलो बुवाकी छोरीसंग उतैबाट प्रेम गरिर’हेका रहेछन् ।
उनीहरुबीच प्रेम छ भन्ने कुरा त अहि’ले देवेन्द्र नेपाल आएर आफ्नै दिदी खेमसरालाई भ’गाएर लगेपछि परिवार र आफन्तलाई थाहा भएको हो । देवेन्द्र नेपाल आएर पनि आफ्नो घरमा नब’सेर दिदी बसेकै घरमा बसिरहे । त्यति हुँ’दापनि उनीहरुबीचको अ’नैति’क प्रे’म स’म्बन्ध’को बारेमा दुवै परिवारलाई थाहा नै नभएको परिवारका सदस्य’हरु बताउँछन् ।
उनीहरुको भनाईमा देवेन्द्र खेम’सराको घरमा बसेपनि आफ्नै काकाको घर त हो नि भन्ने भएको रहेछ । एउटै घरका छोरा’छोरीको यस्तो अ’नै’ति’क स’म्ब’न्ध होला यो कसैले पनि पत्या’उनै नसक्ने कुरा हो । देवेन्द्र र खेमसराको परिवारलाई पनि यस्तै भईदियो । आफ्नै छोरीले देवरको छोरासंग भागेर गएको कुरा’लाई खेमसराकी आमा मिडियामा रुँदै भन्छिन्,‘गाउँ समा’जमा मुख नै देखाउन नहुने बनाए ।
माईत तिरबाट आफ्नै बहीनीको छोरा घरति’रबाट आफ्नै देवरको छोरा । यीनीहरु आफ्नै दुई’भाई दुईबहीनी हुन् । के गरे यस्तो ? सुन्ने नसकिने र भन्नै पनि सजिलै नस’किने के गरे गरे यस्तो । साह्रै ला’ज भयो बाबु………..’ – इताजा खबरबाट
March 4, 2021 admin समाचार 4145
January 29, 2021 admin समाचार 4251
सल्यानमा अनौठो घ’टना भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि सल्यानका नरेश राना र प्रकाश मले’सियामा थिए । उनीहरुको चि’नजान मलेसियामै भएको थियो । दुई जना साथी भए । प्रकाश र नरेशले एक अर्कालाई श्रीमतीहरुसंग पनि
April 4, 2021 admin समाचार 3893
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रि’केट रङ्गशला एक नेपाली निर्माधिन बहुउपयोगी रङ्गशाला हो। यो रङ्गशाला धुर्मुस सुन्तली फाउन्डे’सनले भरतपुर महानगरपालिका भित्र नि’र्माण गरिरहेको छ । फाउन्डेसनले भरतपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सिलान्यासको दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214468)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209114)